Aung's Investment: 12/5/10 - 12/12/10
Bond, Treasury Bond - အပိုင်း(၂)
Treasury Securitiesတွေအကြောင်း General Ideaရပြီဆိုရင် Stock Traderတစ်ယောက်အနေနဲ့ Treasury Yieldတွေကို ဘယ်လိုယူသုံးလို့ရသလည်း ကြည့်ရအောင်။ အောက်မှာ Bloombergကနေ Copyလုပ်ပြီး different treasury seriesတွေကို ပြထားပါတယ်။ အရေးကြီးတာက ပုံအောက်ဘက်မှာပါတဲ့ Yield Curveကို ကြည့်တတ်ဖို့ လိုပါတယ်။
Yield Curveရဲ့ X-axisဟာ Maturityတွေ တိုရာကနေရှည်သွားတာကို တွေ့မှာပါ။ Y-axisကတော့ ရတဲ့ Yieldတွေပါ။ အပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့ Yield Curveဟာ ပုံမှန် Not-so-bad curveပါ။ Bond Marketဟာ Bondတွေကို Tradeတဲ့နေရာမှာ Near-term Inflation Expectationနဲ့ Long-term Inflation Expectationကို အမြဲကြည့်ပြီး tradeကြပါတယ်။ Inflation Expectationဟာ ဘာလို့အရေးကြီးလည်းဆိုတော့ Inflationတက်လာရင် Controlလုပ်ဖို့ Central Bank/Fedဟာ Cash rateတက်ရပါမယ်။ Inflationary Pressureများလို့ Cash rateဟာ ဆက်တိုက်လှိမ့်တက်ရင် Bond Yieldတွေဟာ သိပ် Attractiveမဖြစ်တော့ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် သာမန်Bondတွေဟာ Inflation-protected မဟုတ်ပါဘူး။ Inflation-protectedမဖြစ်ဘူးဆိုတာက ကိုယ်အခု Investလုပ်ထားတဲ့ပိုက်ဆံဟာ ကိုယ်သာBondကို Matureဖြစ်တဲ့အထိ ကိုင်ထားခဲ့ရင် Inflation over timeကြောင့် တန်ဖိုးလျော့နေမှာကို ဆိုလိုတာပါ။
ဒါကြောင့် Long-term inflationဟာ near-term inflationထက် များမယ်ထင်ရင် 30yr Yieldဟာ 2yr, 10yrထက် များကိုများပါမယ်။ Economyသိပ်ကောင်းပြီး Expandဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် Yield Curveဟာ ထောင်တက်နေတာ တွေ့ရပါမယ်။ Near-term Economyမကောင်းနိုင်ဘူးလို့ Bond Marketကယူဆရင် ပိုက်ဆံကို Near-term maturity such as 2yr, 10yr notesတွေမှာ Investပြေးလုပ်တတ်ကြတာမို့ Yield Curveဟာ Flattenဖြစ်ရင်ဖြစ်၊ ပိုဆိုးရင် ပြန်တောင် Slopeဆင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ Bond Marketဟာ Billionနဲ့ချီတဲ့ Transactionတွေ Dealလုပ်တာကြောင့် Sophisticated investors, Instutitional investorsတွေပဲ အများအားဖြင့် လုပ်ကြတာများပါတယ်။ သူတို့တွေရဲ့ Inflationနဲ့ Economy expectationဟာလည်း Stock Marketထက်သာတယ်လို့ တချို့ကခံယူကြပါတယ်။ Stock Marketထဲမှာတော့ သူများပြောသမျှလိုက်ဝယ်တတ်တဲ့ Retail investorsတွေက ပိုများတတ်တာကိုး။
အပေါ်မှာပြောသွားတာက Yield တစ်ခုနဲ့တစ်ခုရဲ့ Relationshipကိုကြည့်ပြီး Bond Marketရဲ့ Expectationကို ကြည့်တဲ့နည်းပါ။ အဲဒီ့Understandingကနေမှ Forex Traderပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Stock Traderပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်domainနဲ့ ဘယ်လိုပတ်သက်နေသလဲ သိရပါမယ်။ Yield curveထောင်နေရင် Inflationလာတော့မယ်။ Inflation means higher cash rates. Higher cash rateဆိုရင် အဲဒီ့အစိုးရရဲ့ Currency ဈေးတက်ပါမယ်။ Higher interest rateဟာ Stock Marketအတွက် မကောင်းပါဘူး။ Leverage / Marginနဲ့ Tradeတဲ့သူအရမ်းများတဲ့ Marketမှာ Interest rateနည်းနည်းတက်တာဟာ Deadlyဖြစ်ပါတယ်။
Flow of the Money
နောက်တမျိုးမြင်တတ်ရမှာက Investလုပ်လို့ရတဲ့ Cashတွေကို အပုံလိုက်ကြီးမြင်ကြည့်လိုက်။ အဲဒီ့အပုံထဲက Cashတွေဟာ Forex, Bond, Stock, Commoditiesဆိုတဲ့ Marketမျိုးစုံစီကို Investmentတွေအနေနဲ့ ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဖြစ်နေပါမယ်။ Bond Yieldတွေတက်နေရင် သာမန်အခြေအနေမှာတော့ ပိုက်ဆံဟာ Bond Marketထဲကနေ စီးထွက်နေတာပါပဲ (Yieldတက်တယ်ဆိုတာ Bond ဈေးကျလို့ပါ။ ဈေးကျတယ်ဆိုတာ Sellerများနေလို့ပါ)။ သာမန်အားဖြင့်ကတော့ Bondကနေထွက်လာတဲ့ ပိုက်ဆံဟာ Stock Marketထဲကို ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Stock Market Indexတွေနဲ့ Bond Yieldတွေဟာ Directly Proportionateဖြစ်တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အောက်မှာ 10yr Note Yieldနဲ့ Dow Jones Index, 10yr Note Yieldနဲ့ US Dollar Indexတွေကို ယှဉ်ပြထားပါတယ်။
တခါတလေမှာ အပေါ်မှာပြထားတဲ့ Correlationဟာ ပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ နည်းနည်းဖောက်မယ်ပေါ့။ Federal reserve/Central bankတွေရဲ့ ဝင်နှောင့်မှုတွေကြောင့် Generallyဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာ Fedက Treasuryတွေကို ပိုက်ဆံရိုက်ထုတ်ပြီး လိုက်ဝယ်မယ်ဆိုတာနဲ့ Treasuryတွေ ဈေးတက်ကုန်ပါတယ်။ ဒီတော့ Bond Yieldတွေကျကုန်တာပေါ့။ Stock Marketကတော့ Fedဟာ Economyကောင်းလာဖို့ လုပ်နိုင်သမျှလုပ်မယ်ဆိုတာ သိရတာနဲ့ မကျတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီlast quarterမှာ Dow Jonesနဲ့ 10yr yield relationshipဟာ နည်းနည်းဟသွားပါတယ်။ အခုတစ်ပတ်အတွင်းမှာ Yieldတွေ ပြန်ထောင်တက်လာပါတယ်။ ဘာလို့လည်းသိသလား? Obamaက Republicanတွေကို Tax cutနဲ့ပတ်သက်ပြီး အရှုံးပေးတော့မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းထွက်လာလို့ပါ။ Bush tax cutတွေကို Extendထပ်လုပ်ရင် အစိုးရရဲ့ tax revenueကို လျော့စေပါမယ်။ ဒီတော့ Obamaဟာ Bondတွေ ပိုထပ်ရောင်းရလိမ့်မယ်လို့ Marketက Expectလုပ်ထားလို့ပါ။ USရဲ့ Deficitဟာ ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ တချို့ကယူဆကြတဲ့အတွက် Bondတွေကို Selloffလုပ်တဲ့အခါမှာ Yieldတွေ ပြန်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ Yieldပြန်တက်လာကြောင့်ရော၊ European debt crisisကြောင့် Euro dollarကျတာကြောင့်ပါ အခုတလော US dollar နည်းနည်းပြန်ထောင်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Want to beagood trader?, Gotta know Bond market
ဒီလောက်ဆိုရင် Bond Marketဟာ Stock marketကို ဘယ်လို Influenceဖြစ်လဲသိလောက်ပြီထင်ပါတယ်။ သတိထားရမှာက Bond Yieldတွေဟာ Stock Marketနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်သွားနေရင် သတိထားရပါမယ်။ Special circumstancesတွေမရှိပဲ Stockတွေက တက်နေပြီး Yieldတွေက ကျနေရင် ဆိုလိုတာက Institutional investorတချို့ဟာ ပိုက်ဆံကို Stockထဲမထည့်ပဲ Bondတွေလိုက်ဝယ်နေတယ်လို့ သဘောပေါက်ရပါမယ်။ Stock uptrendကို Bond marketက confirmမလုပ်ဘူးလို့ တွေးနိုင်ပါတယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက်တွေးရင် Stock Market selloffဖြစ်နေတုံး Bond Yieldတွေ ပြန်တက်နေပြီဆိုရင် သဘောပေါက်ရမှာက Safe haven purchaseတွေ ရပ်နေပြီလို့ သိရပါမယ်။ Dow Jonesဟာ 2009 Marchမှာ ဟိုးအောက်ရောက်နေချိန်မှာ 10yrက နှစ်လလောက် ကြိုပြန်တက်နေတာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ အချိန်ဟာ နည်းနည်းLagဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Typicallyကတော့ Bond Yield Trendကို Stock Marketက catch upလုပ်တတ်ပါတယ်လို့ပြောရင်း နိဂုံးချုပ်ပါတယ်။ နောက်ကြုံရင် Bondတွေအကြောင်း ထပ်ပြောပါဦးမယ်။
PS : 10yr yield quick chart, 30yr yield quick chart, Bloomberg Bond Page
Posted by Aung Myo Htet at 12/10/2010 11:51:00 AM2comments
Labels: bonds, fixed income, market correlations, methods, treasuries
Bond, Treasury Bond - အပိုင်း(၁)
မှတ်မိလွယ်အောင် James Bondလို ရေးထားတာပါ :) ကျွန်တော် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်လောက်အထိက Stock Tradingလုပ်တဲ့အခါမှာ Stock marketတစ်ခုထဲကိုပဲ Focusထားပြီး လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်လာတာက Marketတွေ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ဆက်စပ်မှုဟာ ကိုယ်ထင်ထားတာထက် ပိုပြီးCloseဖြစ်တယ်လို့ သိလာရတယ်။ Marketတွေလို့ ဆိုရာမှာ Stock, Forex, Commoditiesနဲ့ Bond marketတွေပါ။ Marketအားလုံးရဲ့ General Trendတွေကိုပါ ထည့်ပြီးAnalysisလုပ်တဲ့အခါမှာ Tradeတွေဟာ ပိုပြီးProfitableဖြစ်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီPostမှာ Bond marketကို ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလည်းဆိုတာ ပြောပြပါမယ်။ Bond အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင် တနေကုန်ထိုင်ပြောလို့ရတယ်။ ဒီတော့ စာဖတ်သူတွေအတွက် အရှင်းဆုံးနဲ့ အလွယ်ဆုံးဖြစ်အောင် လိုတိုရှင်းပဲ ဒီPostမှာ ရေးထားပါတယ်။
When Governments are short of money
Bondတွေမှာ အဓိကအားဖြင့် Government Bondတွေနဲ့ Corporate Bondတွေဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ Corporate Bondကို ခဏထားပြီး Government Bond marketအကြောင်းကိုပဲပြောသွားပါမယ်။ Govt Bondကပဲ တခြားMarketတွေကို ပိုပြီးInfluenceလုပ်နိုင်လို့ပါ။ Govtတွေမှာ ပိုက်ဆံရစရာ အဓိကနည်းလမ်းသုံးမျိုးပဲ ရှိတယ်။
Taxes (you should know very well)
Other income (such as Tolls, etc)
Bondဆိုတာ အစိုးရက ကျွန်တော်တို့လို hardworking citizensတွေ၊ တိုင်းပြည်ရဲ့ resourcesတွေကို အပေါင်ထားပြီး တခြားတိုင်းပြည်တွေနဲ့ Private/Institutional investorsတွေဆီကနေ ပိုက်ဆံချေးတာပါပဲ။ Bond Marketကို Fixed income marketလို့လည်း ပြောကြပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အစိုးရက သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အတွင်းမှာ every six months or so, Fixed Interestမှန်မှန်ပေးလို့ပါပဲ။ အဲဒီ့ Interestsဟာ Bondရဲ့သက်တမ်းအတွက် Issueလုပ်တုန်းက တခါတည်းFixedလုပ်ပြီးသားပါ။
Most Important Concept of Bond - Yield (%)
Bondအကြောင်းပြောရင် မသိမဖြစ်သိရမှာက Yieldဆိုတာပါပဲ။ အစိုးရဟာ Bondတွေကို စရောင်းတာက very few Primary Dealersတွေကိုပဲ ရောင်းတာပါ။ Bondတွေကို ရောင်းတဲ့အခါမှာ လေလံစနစ်နဲ့ ရောင်းပါတယ်။ သူတိုကနေမှ ကျွန်တော်တို့လို အပြင်ကသူတွေ ပြန်ဝယ်ရောင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Bondကို Tradeလုပ်တဲ့အခါမှာ တိုင်းပြည်အခြေအနေတွေပေါ် မူတည်ပြီး Bond priceဟာ ကျချင်ကျမယ်၊ တက်ချင်တက်မယ်။ ဒါပေမယ့် အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလို အစိုးရဆီက Regularlyရမယ့် Interest amountက Fixedလုပ်ပြီးသားပါပဲ။ ဒါကြောင့် ကိုယ်တကယ်ရင်းနှီးရတဲ့အပေါ်မှာ ရတဲ့Interestကို Bond Yieldလို့ ခေါ်ပါတယ်။ Bond Priceနဲ့ Bond Yieldဟာ Inverselyအချိုးကျပါတယ်။ Bondဈေးတက်ရင် Yieldကျမယ်၊ Bondဈေးကျရင် Yieldတက်ပါမယ်။ Bondအကြောင်းနားလည်ချင်ရင် ဒီFormulကို မသိလို့ကို မရဘူး။
ဥပမာ Bond price ၁၀၀၀အတွက် အစိုးရဆီက တစ်နှစ်ကို Fixed interest ၁၀၀ရမယ်ဆိုပါတော့။ Fixed Interestဟာ ၁၀%ပေါ့။ ကိုယ်က Secondary market/Retail marketထဲမှာ အဲဒီ့ 10%ရဖို့အတွက် Bond priceကို ၁၀၀၀ပဲပေးရတယ်ဆိုရင် Parဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Yieldနဲ့ အစိုးရဆီက ရမယ့် Fixed interestဟာ အတူတူပဲပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်က အစက ၁၀၀၀တန်တဲ့ Bondကို ၈၀၀နဲ့ရရင် ၁၀၀/၈၀၀ = ၁၂.၅% Yieldဖြစ်ပါမယ်။ ကိုယ်က ၁၂၀၀ပေးရရင် Yieldက ၁၀၀/၁၂၀၀ = ၈.၃၃%ဖြစ်ပါမယ်။ အဓိကကတော့ အစိုးရဆီက ရမယ့်ပိုက်ဆံဟာ မပြောင်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ဝယ်တဲ့ ပိုက်ဆံပမာဏဟာ ပြောင်းနေပါမယ်။ တူရင် Par, ပိုပေးရရင် Premiumနဲ့ လျော့ရရင် Discountလို့ ခေါ်ကြပါတယ်။
Why Bond Prices move
အစိုးရနဲ့ Central Bankတွေအပေါ်မှာ မူတည်ပြီး Bond Pricesတွေဟာ တချိန်လုံးပြောင်းနေပါတယ်။ Stock Market, Forex Marketတွေအတိုင်းပဲ သူတို့ကို Dealerတွေဟာ Tradeနေကြပါတယ်။ အစိုးရ Major policy change ဖြစ်တဲ့ eventတွေဟာ Bond Marketကို ဂယက်ရိုက်နိုင်ပါတယ် - ဘယ်လိုဟာမျိုးလည်းဆိုတော့ ဟိုတလောက US Federal Reserveက US dollarအသစ်ရိုက်ထုတ်ပြီး US Govtရဲ့ Bondတွေ လိုက်ဝယ်မယ်ဆိုတာနဲ့ Bondဈေးတွေတက်ကုန်တာပါပဲ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ Fedက Supportပေးသလိုဖြစ်နေတာကိုး။ Australian Central Bankက Cash Rateကို Inflationကြောက်လို့တိုးတိုင်း Australian Dollar forex rateဟာ တက်သွားတာကို တွေ့ရပါမယ်။ အပေါ်ယံကြည့်ရင်တော့ Cash Rateကို မက်လို့ Australian Dollarကို လိုက်ဝယ်ကြတယ်လို့ ထင်မှာပဲ။ တကယ်တမ်းတော့ ဒါဟာIndirect affectပါ။ Australian Governmentဟာလည်း ပိုက်ဆံလိုရင် Bondထုတ်ရောင်းရတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ပေးတဲ့ Bond Yieldဟာ Official cash rateထက်မှ မသာလို့ မရပါဘူး။ မသာမှတော့ သူတို့Bondကို ဘယ်သူက ဝယ်မလည်း။ ဒီတော့ Cash Rateတက်ရင် Bond Yieldလိုက်တက်ရမယ်။ Bond Yieldတက်ရင် အဲဒီ့Bondဟာ Attractiveဖြစ်လို့ လိုချင်ရင် Aussie Bondကို Aussie Dollarနဲ့ ဝယ်ရပါမယ်။ ဒါကြောင့် AUD rateဟာ ဝယ်လက်များလို့ တက်သွားရတာပါ။
၂၀၁၀တစ်နှစ်လုံးလိုလို PIIGS europen countriesတွေ ဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်နေကြလည်း Investmentအကြောင်း နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားတာနဲ့ သိမှာပါ။ Greeceအစိုးရဟာ ပိုက်ဆံတွေအများကြီးချေးထားပြီး ပြန်ဆပ်ချင်မှ ဆပ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းသဲ့သဲ့ထွက်လာတာနဲ့ Marketထဲမှာ Greece Bondတွေ ချရောင်းကြတာပါပဲ။ ရောင်းလိုအားများတော့ Bondဈေးတွေကျ၊ Bond ဈေးတွေကျတော့ Yieldတွေ ဆောင့်တက်ကုန်တာပါပဲ။ Marketက ဆိုလိုတာက မင်းတို့အစိုးရက သိပ်စိတ်မချရဘူး၊ ဒီတော့ ငါ့ပိုက်ဆံလိုချင်ရင် Bondဈေးကို ချရောင်းလို့(Effectively Raising Bond Yields) တောင်းဆိုတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ Bond Yieldတွေ တက်နေတိုင်း အစိုးရဟာ Bondရောင်းတဲ့အခါမှာ ပေးရတဲ့ Fixedအတိုးချင်းအတူတူ စစချင်းရတဲ့ ပိုက်ဆံပိုနည်းသွားတယ်လို့ တွေးနိုင်ပါတယ်။ နူရာဝဲဆွဲ လဲရာသူခိုးထောင်းဆိုတာ အဲဒါအစစ်ပဲ။
Bondတွေမှာ အစိုးရက ဘယ်တော့မင်းတို့ပိုက်ဆံပြန်ရမယ်ဆိုပြီး အာမခံထားတဲ့ Periodတွေရှိပါတယ်။ အဲဒီ့Periodတွေ အတိုအရှည်ပေါ်မူတည်ပြီး အခေါ်အဝေါ်တွေလည်း ကွဲသွားပါတယ်။
4wk - 52wk Maturityတွေကိုတော့ Bills (Treasury Bill in USA)
2yr - 10yr Maturityတွေကိုတော့ Notes (Treasury Notes) နဲ့
30yr Maturityကိုတော့ Bonds (Treasury Bonds)တွေလို့ ခေါ်ကြပါတယ်။
Marketထဲမှာတော့ 10yr yieldဘယ်လောက်, 30yr ဘယ်လောက်အစရှိသဖြင့် လွယ်လွယ်ပဲပြောကြပါတယ်။ 2yr, 10yrနဲ့ 30yrတွေဟာ Marketထဲမှာ Hottestအဖြစ်ဆုံး Maturityတွေပါ။
US Govt Bond = Safe Haven
US Govt Bondတွေဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ Safeအဖြစ်ဆုံးလို့ မှတ်ယူထားကြပါတယ်။ US Govtက Guaranteeပေးတဲ့ Investmentပေါ့။ တကယ်တမ်းတော့ US Economyနဲ့ US citizensတွေရဲ့ tax revenueတွေကို backလုပ်ပြီး ပေးတဲ့Guaranteeပါပဲ။ ဘာကြောင့် Institutionတွေဟာ စိတ်ချချင်ရင် ပိုက်ဆံကို ဘဏ်တိုးမထားပဲ Bondဝယ်ကြသလည်း သိသလားမသိဘူး။ ဘဏ်မှာထားတဲ့ Depositတွေဟာ အတိုင်းအတာတခုအထိပဲ Government Guaranteeရှိပါတယ် - ဥပမာ လူတစ်ယောက်ကို နှစ်သန်းအထိပဲ အစရှိသဖြင့်ပေါ့။ ဘဏ်ပျက်ပြီး ကိုယ့်ပိုက်ဆံက နှစ်သန်းအထက်ဆိုရင် သေဖို့သာပြင်ထား။ ဒီတော့ Billionနဲ့ချီတဲ့ Cashတွေကို Manageလုပ်တဲ့ Money Managerတွေဟာ စိတ်ချချင်ရင် Bondကလွဲလို့ တခြားဘာမှမရှိပါဘူး။ Bondကတော့ ကိုယ်Investလုပ်သမျှ အစိုးရက တာဝန်ယူတာကိုး။ ကိုယ့်မှာနှစ်သန်းတောင်မှမရှိတာ ငါနဲ့မဆိုင်ပါဘူးလို့ ထင်နေသလားမသိဘူး။ မထင်ပါနဲ့ Bond Marketရဲ့ Ripple Effectဟာ လူတိုင်းနဲ့ ဆိုင်ပါတယ် - at least Mortgage ownersတွေလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
If you haveahome loan in America, You better know 30yr bond yield
USကို ဥပမာပေးပြောပေမယ့် conceptဟာ တိုင်းပြည်တိုင်းအတွက် အတူတူပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ အိမ်ဝယ်ရင် ဘဏ်ကချေးတယ်မဟုတ်လား။ ဘဏ်က ချေးဖို့ပိုက်ဆံကို ဘယ်ကရသလည်း? ကျွန်တော်တို့ထားတဲ့ Saving depositတွေဟာ သူတို့ချေးသမျှ home loanတွေအတွက် မလုံလောက်ပါဘူး။ Residential Mortgage Backed Security (RMBS)ဆိုတာ ကြားဘူးသလားတော့ မသိဘူး။ ဒါဟာ Lenderတွေက ကျွန်တော်တို့ mortgageတွေကို Securityတစ်ခုအနေနဲ့ Backingလုပ်ပြီး Investorတွေကို ပြန်ရောင်းတာပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ cashတွေ၊ အလုပ်ကရတဲ့ လခတွေကောင်းလေ RMBSရဲ့ Credit Qualityကောင်းလေပေါ့လေ။ RMBSကို ဝယ်မယ့်သူဘက်က ကြည့်ရင် RMBSက ပုံမှန်ရရမယ့်အတိုး(ဟုတ်ပ ကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ အတိုးတွေပါ)ဟာ ပိုပြီး စိတ်ချရမယ့် Treasury Bondထက် ပိုမရရင် ဘယ်သူက Investလုပ်မလည်း? Uncle Samဆီမှာပဲ Investသွားလုပ်မှာပေါ့။ ဒါကြောင့် 30yr yieldတက်ရင် US mortgage ownerတွေဟာ အတိုးပိုပေးရပါမယ်။ မဟုတ်ရင် Marketရပ်သွားပါလိမ့်မယ်။ 30yr yieldတွေ တက်နေတဲ့အချိန်မှာ သွားပြီး Fixedလိုက်မိရင် သေဖို့သာပြင်ထားပေတော့။ အခု US Federal Reserveက Dollarရိုက်ထုတ်ပြီး US Treasuryတွေလိုက်ဝယ်မယ်ဆိုတာ အဓိကက အဲဒီ့အတွက်ပဲ။ Treasury Yieldတွေဟာ Credit Marketရဲ့ Benchmarkဆိုတော့ သူတို့လိုက်ဝယ်ရင် Treasuryဈေးတက်မယ် - ဒီတော့ Yieldတွေကျမယ် - ဒီတော့ Mortgageeတွေပေးရတဲ့ အတိုးတွေ ကျသွားမယ်ပေါ့။ ကဲ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ ထင်သေးလား?
ရေးရေးချင်းတုန်းကတော့ တစ်Postထဲနဲ့ ပြတ်မယ်ထင်တာ၊ အခုထိ လိုရင်းကို မရောက်နိုင်သေးဘူး။ အပိုင်း(၂)မှာ Traderတစ်ယောက်အနေနဲ့ Treasury Yieldတွေကို ဘယ်လိုအသုံးချရမလည်း ပြောပြပါမယ်။ အောက်မှာ 30yr yield chartကို ပြထားပါတယ်။
Posted by Aung Myo Htet at 12/09/2010 02:27:00 PM2comments
Labels: bills, bonds, fixed income, methods, notes, technical analysis, treasuries
မြန်မာCommunityအတွက် Investment, Financeနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တထောင့်တနေရာက ပစ်ကူပေးဖို့ InvestMyanmar.netကို ကိုအောင်စည်သူကျော်က ဒီနေ့ပဲLaunchလုပ်ထားပါတယ်။ မြန်မာwebsiteတွေထဲမှာ Investmentနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရေးတာရှားပါးတာမို့ Warmly Welcomeပါ ကိုအောင်စည်သူကျော်။
Posted by Aung Myo Htet at 12/07/2010 07:14:00 PM 1 comments
Labels: community, friends, investmyanmar.net